Nhasi isu takatumira kunze aya maviri roller kupisa muchina wemuchina kuVietnam. Roller kupisa yekuchinjisa michina odha izere nemwedzi miviri iyi uye nokutendeseka kunonoka mamwe maodha uye kukonzera zvisingaenderane nemutengi. Yako inotevera kuraira, ndokumbira utore munguva pfupi kuti ubate iyo nguva iwe ...Verenga zvimwe »
Kushanda Nhanho 1. Ita shuwa kuti unobatanidza magetsi matatu phase simba mushe. Dhinda "Blanket Enter" bhatani, gumbeze rinoswedera padhiramu uye iyo "Blanket Action Indication" mwenje uye maalarm panguva imwe chete. Mushure megumbeze wanamatira zvachose ku ...Verenga zvimwe »
Iyo ASGA Show kuVietnam yaive budiriro huru gore rino futi. Michina yedu yekudziya yekupisa zvakare yakafarikanya mukurumbira senge zvataitarisira. Sezvinoenderana nekudyiwa kwavo, isu tinoisa muchina wehupfumi nemitengo yakanaka kusangana nezvinodiwa. Uye fungidzira chii, pazuva rekutanga rekuratidzwa, isu takaita ...Verenga zvimwe »
Kuita kwemafuta anodziya: Kwakanyanya kupisa Kutamisa Kushanda, kugadzikana kwakanaka kwekushisa, kugona kwakanyanya kupisa uye coefficient of thermal conductivity. Nekudaro, mafuta anopisa anozoitika Chain kutsemuka pakati peatomiki nemamorekuru, mukomboni uchaora kuitira kuchengetedza tembiricha yakakwira ...Verenga zvimwe »
Iyo SGIA inoratidza 2016 kuLas Vegas yaive hombe uye inotyisa seguta iri kuitisa. Isu kuASIAPRINT taifara kwazvo nezvekuratidzwa uku nekuti tanga tine chikonzero chinopfuura chimwe chete chekunzwa kudaro. Kwete chete nekuti isu tine inoshamisa kubhururuka kwemaawa gumi nematanhatu asiwo kusangana nevanhu vane hunhu uye vane mutsa muLas Vegas. Isu ...Verenga zvimwe »